भारतीय राज्यसभामा नेपाली पनि बोल्न पाइने
काठमाडौं : भारतीय राज्यसभामा सदस्यहरूले नेपाली र मैथलीमा पनि बोल्न पाउने भएका छन् ।
राज्यसभाका सभापति एम. वेंकैया नायड्ले मंगलवार उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
संसदको आगामी मनसुन सत्रमा राज्यसभामा सांसदले भारतीय संविधानको आठौं सूचीमा समावेश सबै भाषामा बोल्न पाइने नायड्ले जानकारी दिएका छन् ।
आठौं सूचीमा समावेश २२ भाषामध्ये कुनै पनि भाषामा बोल्न पाइने उनले स्पष्ट पारेका छन् । राज्यसभा सचिवालयले डोगरी, कश्मीरी, कोङ््कणी, सन्थाली र सिन्धीका लागि पनि अनुवादको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । यो खबर आजको ‘अन्नपूर्ण’ राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा प्रकाशित छ।
नायड्ले मंगलवार औपचारिक रूपमा यी भाषाका अनुवादकलाई राज्यसभाको अनुवादक टोलीमा सामेल पनि गरे ।
२२ भाषामध्ये राज्यसभामा असम, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, मलयालम, मराठी, उडिया, पञ्जाबी, तमिल, तेलगु र उर्द्ू ११ भाषामा यसअघि नै यो व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
बोडो, मैथली, मणीपुरी, मराठी र नेपाली भाषाको निम्ति अनुवादकको व्यवस्था भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
नायड्ूले भने, ‘कुनै अवरोधविना आफ्ना अनुभव र विचार व्यक्त गर्न स्वभाविक रूपमा मातृभाषामा उत्तम हुन्छ । मातृभाषामा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न निकै सहज हुने भएकाले यसमा जोड दिइएको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘उसैले मैले २२ वटै भाषामा अनुवादको सुविधा उपलब्ध गराउन चाहेको थिएँ । आगामी मनसुन अधिवेशनदेखि यो सम्भव भएको छ । म यसमा खुशी छु ।’
प्रकाशित : बिहिबार, असार २८, २०७५०९:०६
काठमाडौंको दरबारमार्गकै जस्तो घटना इटहरीमा पनि घट्यो
देशको भूमिरक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सेना इन्चीटेप बोकेर कित्ताकाट गर्दै घडेरी बेचबिखनमा
छिमेकी नै पापी भएपछि कसको के लाग्छ र ? : राति एसिड हान्ने, दिउँसो कुरुवा बस्ने
‘तेस्रो लिङ्गी’ले ठमेलमा यसरी गर्छन् लुटपाट
ओलीले मन्त्रीपरिषद बैठकमा मन्त्रीहरुको सातो लिए: यति छिट्टै हटाइँदै मन्त्री! को–को परे धरापमा ?